ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအဆိုအမိန့်များ......
ညချစ်သူ | 3:53 AM | ဗဟုသုတ
ညချစ်သူ | 3:53 AM |
၂။ အလုပ်ဟာလူသားများအတွက် စည်ပင်သာယာရေးအတွက်ရေသောက်မြစ်ဖြစ်တယ်။လူ့ဘဝရဲ့အခြေခံဖြစ်သောအလုပ်ကိုရှောင်လွဲလို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
Work is the inevitable condition of human life, the true source of human welfere.
၃။ ဘုရားရှင်ဟာငှက်သတ္တဝါတိုင်းကိုအစာပေးတယ်။သို့သော်ငှက်သိုက်အတွင်းသို့် အစာကိုပစ်မသွင်းပေးပါ။
၇။ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်ရလျှင် ပျော်ရွင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကြိုက်လာမှတကယ့်ပျော်ရွင်မှုကိုရနိုင်တယ်။
Your happiness lies not in doing what you like but in liking what you have to do.
Those who have some mean think that the most important thing in the world is love. The poor know that it is money.
၁၃။အခြားလူများလုပ်ရန်ခက်ခဲ့သည့်အလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာလုပ်နိုိ်င်ခြင်းမှာ အထူးကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပြီး မဖြစ်နိုင်သည့်အရာကိုလုပ်နိုင်ခြင်းမှာပါရမှီသာဖြစ်တယ်။
၁၆။ ငွေဆိုတာလူတို့ရဲ့ဘ၀ကိုသရုပ်သကန်ဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ရလိုက် ၊ ဆုံးရှုံးလိုက် ၊လိုအပ်လိုက်၊ မြတ်နိုးလိုက် ၊
Money is what life is all about getting it loosing it needing it loving it and dying for it.
Posted by ညချစ်သူ at 3:53 AM